TAAJJABBII-Kutaa 194ffaa – GALATA, HUBACHIISA, KAAYYOO, KAROORAAfi WAAMICHA TAAJJABBII (Gaggabaabinaan)
GALATA, HUBACHIISA, KAAYYOO, KAROORAAfi WAAMICHA TAAJJABBII (Gaggabaabinaan)
Baatii 4’n dura Taajjabbiin ifatti hojii eegale. Hojii hojjete keessattis milkii guddaatu argame; mancaatii lubbuu garmalee shira keessa mana Oromooti ka’u dura dhaabatee kaayyoo badii aggaamame fashaleesseera; hubannoo ciccimoo keessumattuu dhaloota biyya keessa jiraniif kenneera. Kana hundumaaf namoota dammaqoo kan gorsaafi qajeelcha mimmiidhagoo naaf laatan; keessumaa dhaloota biyya keessa jiran bakkee TAAJJABBII irratti yaada kennuu hindandeenye garuu keessaan maddeen qabatamaafi shira alaaf keessaa nagargaaruun sabaaf ifa taasisaniif galata guddaan qaba.
TAAJJABBIIn Nama tokkorratti xiyyeeffateera warri jedhaniif dhaamsa xiqqoo. Namoonni akkana jedhan baayyeensaanii warra Taajjabbii dubbise miti; dubbisanis warra hubattoota miti; mata duree arginaan bira taruun warra suusii arrabaaf fiiganidha. Taajjabbii’n nama tokko kan xiyyeeffate yoo fakkaate; nama tokkoo sanatu abbaa Irrummaan lafa hundumaatti waan of mumuldhiseefi kijiba nama kuaa kophaasaa oofaa waan ooluufidha. Qabiyyeensaa gadi fagoon hunda ilaallata; shira keessaafi alaa; network’ bara hedduuf xaxamaa ture sana diiguurratti xiyyeeffateera; kanaafis ragaan holola gamaafi gamanatti karaa hedduun Taajjabbiirratti qindaa’edha.
Kaayyoon TAAJJABBII nama dhabamsiisuuf utuu hintaane, shiroota mana Oromoo keessaa dhabamsiisuufidha. Mana keenya keessa shira mana halagaa kan caalutu kuufameee jira; dhukkubbii mana keenya keessaatti hinfayyinu taanaan halagaa ofirraa galagalchuu hindanddeenyu. Harki halagaa faayidaan da’atee warreen nuti miidiyaan gurguddoota isaaniin jennu marmaratee qabatee jira. Sana gorsaaf yaadachiisaan dadhabneetu sabuma bal’aaf ifa taasifnee furmaataaf mala dha’uu wayya jenneetu. Kanaafuu, taajjabbiin ammas haqa karaa maqe dura dhaabbachuudhaaf, hojii toora gadi lakkise ifachuudhaaf goolee addunyaa kana mararraa madda akkatti argaturratti hojjetaa jira; hojjeteeras.
Karoorri TAAJJABBII’n qabu haala irra caalaa qindaa’aawaafi amansiisaa ta’een kalaqa kana olguddisuufi tumsuudha; maqaa kanaanis miidiyaa keessatti Torbeetti guyyaa tokko haalawwan Oromiyaa alaaf keessaa taajjabuudhaaf ‘QOPHII TAAJJABBII’ DIINQA OROMOO’ jalatti uumuudhaaf hojiirran jira. Taajjabbiin kan dhaabatu utuu hintaane, akkuma marsariitii ‘ANBEEKAN.COM’ jedhamu jalatti manni laatameefi jirutti oluma guddisuudha. Taajjabbii’n barsiisa, gorsa, akeekkachiisa, sirreeffama, milkaa’inaafi injifannoodha. Warreen saba isaaniif bu’aa gaggaarii buusanis bifa taajjabbiitiin galateeffachuufi sabaaf beeksisuun itti fufa.
Namoonni quuqama qabdan; dubbachuuf karaa dhabdan; shira Oromoorratti xaxamaa jiru hundaaf ragaafi madda kan of harkaa qabdan hundaaf TAAJJABBIIn afaan isiniif ta’a. Karaa barbaaddaniin yoo ergitan maalummaa (profile) keessaan ifa hinba’u. Iccitaan isiniif eegama. Kanaafis qixa fees buukii https://www.facebook.com/beekan.guluma yookaan Email’ dhuunfaa kiyyaa beekanguluma@gmail.com tiin dhaamsa keessan ergachuu dandeessu. Waan gara TAAJJABBII tti ergitan keessaatti waan haqaa, waan waloo (societal issues not personal/individual) akka ta’u hubachiifna. Kan garbummaa waggaa 150 ol nurra bubbulche shira halagaa bakkeerraa utuu hintaane, bitamtoota mana keessa jirtu ta’uu beeka. Dura mana keenyaa qulqulleeffanna.
Walumaagalatti, warreen jalqabamuu TAAJJABBII tiif anaaf jecha yaaddoo keessa jirtan hinyaadda’iina; qajjisi mataakooti hintuqamu. Biyya walabummaan dubbii namaaf eegamu keessan jira. Qixa kamiinuu harka shiroota yaadduu kanaatti hinkufu. Tokkoffaa eegamsi Waaqayyoo anarra jira; kan lammataa anis of eeggannoo guddaan godha. Sunis ta’ee garuu lubbuun kook an nama tokkoo lubboo qeerroowwan keenya qaqaalii shira yaaddoonni dantaa yeroof jettee ficcisiistee sana ol miti. Waan saba kanarratti ta’e alaaf keessaa tokko laman qindeessinee dhalootaaf dabarsuuf dirqama qabna; saba guddaa sanaaf afaan ta’anii haqasaa dubbachuufiinuu carraa guddaadha!
Horaa bulaa, deebanaa, Beekan G Erena, Adoolessa 23, 2017